अलौकिक यात्रामा- प्रिय नेता जगतजंग थापा « Rara Pati
अलौकिक यात्रामा- प्रिय नेता जगतजंग थापा
जगतजंग थापा सानै उमेरदेखि खुब सुनेको नाम हो दैलेख जिल्लामा । अँझ विशेष गरेर जाहरकोट गाउँमा । म सोच्थे यति धेरै रवाफिलो नाम भएको मान्छे स्वाभाव कस्तो होला ? उहाँ हेर्नलाई डरलाग्दो, छुच्चो हुनुहुन्छ होला । जब मैले उहाँलाई भेटे उहाँको स्वाभावसँग म यसै यसै तानिए ।
मुसुक्क मुस्कुराएर कुरा गर्ने मायालु बोलि प्रेमिल स्वाभावले मलाई उहाँसँग कुरा गर्न अझ सजिलो बनाएको थियो । म उहाँलाई धेरै त जान्दिन तर जति उहाँको बारेमा जान्ने मौका पाएँ, उहाँलाई बुझ्ने अवसर पाएँ त्यसलाई यहाँ पस्कने प्रयास गरेकि छु ।
मैले उहाँलाई सानो उमेरदेखि नै चिने पनि उहाँसँग नजिक भएर संवाद गर्ने मौका भने धेरै कम भेटेकी थिए किनकी म स्कुलले जीवन सकेर आफ्नो शिक्षालाई निरन्तरता दिन काठमाडौं भित्रिए पछि मेरो जिल्लामा बसाइ कम भएको थियो । उहाँले आफ्नो जन्मथलोलाई नै कर्मथलो बनाएर जिल्लामा सेवा गरिराख्नु भएको थियो ।
२००७ साल जन्मनु भएको उहाँ आफ्नो स्कुलले जीवन सकेर उच्च शिक्षा हासिल गर्न काठमाडौं पसे पछि उहाँले आफ्नो राजनीति यात्राको सुरुवात गर्न भएको थियो । जिल्ला फर्केर केहि समय शिक्षण पेशामा लागे पनि उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन राजनीतिमा सपर्मित गर्नु भएको थियो । पञ्चायत कालपछि राजनीतिमा पूर्ण रूपले आगमन गर्नु भएका उहाँको जीवनले २०४६ सालपछि एकपछि अर्को गति लिँदै गयो अर्को उचाई छुँदै गयो । यसरी उहाँ जनताका मनमा र माझमा समाउँदै जानु भएको थियो । साँच्चै भन्नु पर्दा राजनीतिको क्षेत्रमा दैलेख जिल्लामा राम्रो दख्खल राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ । जगतजंग थापा भने पछि नचिन्ने कमै मान्छे होला दैलेख जिल्लामा ।
जीतलाई सम्माल्न सक्ने र हारलाई स्विकार्न गर्ने सक्ने उहाँको यो खुबी मलाई साह्रै राम्रो लाग्थ्यो । जुन हामीले २०७४ सालको चुनावमा पनि देखेका थियौ । उहाँले भन्नु भएको थियो ‘हाम्रा आफ्नै केही गल्तीका कारणले हामीले हार्न पुग्यौं, प्रतिपक्षका विजयी साथिहरूलाई बधाई छ । हामी अर्को चुनावमा हाम्रा कमि कमजोरी सुधार्नेछौ र फेरि लड्ने छौ ।’
उहाँले आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण समय राजनीतिलाई दिनु भएको थियो । देश र देशका जनतालाई दिनु भएको थियो । आफ्नो उच्च शिक्षा पुरा भइसक्दा उहाँले जागिरलाई महत्त्व नदिएर देश र जनताको सेवाका लागि राजनीतिलाई छनौंट गर्नु भएको थियो । उहाँको आफ्नो माटोप्रति माया यसै यसै देखिन्छ । जीतलाई सम्माल्न सक्ने र हारलाई स्विकार्न गर्ने सक्ने उहाँको यो खुबी मलाई साह्रै राम्रो लाग्थ्यो । जुन हामीले २०७४ सालको चुनावमा पनि देखेका थियौ । उहाँले भन्नु भएको थियो ‘हाम्रा आफ्नै केही गल्तीका कारणले हामीले हार्न पुग्यौं, प्रतिपक्षका विजयी साथिहरूलाई बधाई छ । हामी अर्को चुनावमा हाम्रा कमि कमजोरी सुधार्नेछौ र फेरि लड्ने छौ ।’ उहाँको यो भनाइले धेरै मान्छेहरूलाई सम्मालेको थियो । राजनीति उहाँको जिन्दगीको थियो मुटुमा धड्किने सास थियो ।
विगतका दिनहरूमा त म जान्दिन तर यी दिनहरूमा उहाँको माटोप्रतिको सम्मान, दैलेख जिल्लाप्रतिको माया उहाँको आँखामा म प्रष्ट देख्न सक्थे । उहाँले आफ्नो जीवनको सत्तरी वर्षको जीवन गर्विलो बाँच्नु भयो । यस्तो जीवन धेरै कम मान्छेले बाँचेका हुन्छन् संसारमा । यो कुनै आम कुरा होइन हामी नेपालीका लागि अझ हामी कर्णालीबासीका लागि । सत्तरी वर्षको जीवनमा पञ्चायत, जनयुद्ध काल, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सम्पूर्ण नेपालीको राजनीति कालको प्रत्यक्षदर्शी समेत हुनुहुन्थ्यो उहाँ । जतिजति देशले उतारचढाव सहँदै गयो देशसँगै उहाँ पनि उतारचढावको भेल मिसिनु भयो ।
केही समय अगाडि म जिल्ला गएको बेला उहाँसँग बसेर धेरै कुरा गर्ने मौका पाएकी थिए मैले । लकडाउनको समय, काठमाडौंबाट जिल्लामा गएकी म उहाँको घरमा उहाँले मीठो मुस्कान सहित गरेको न्यानो स्वागत अहिले सम्झिरहेकी छु । हजुरआमाको हातको त्यति मीठो चिया सायदै मैले कहिल्यै पिएकी थिए होला पहिले । मलाई हतार थियो तर उहाँसँगको सामिप्यताले मलाई हतार भएको महशुस नै भएन । म अबको निर्वाचन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अनुसन्धानको शिलसिलामा उहाँसँग कुरा गर्न पुगेकी थिए । उहाँले भन्नु भयो ‘गाह्रो छ होला तिमीहरुको प्रश्न हामी त बुढो भयौ अब’ , अनि मैले भने ‘हैन यो युवा जवान देखि लिएर सत्तरी वर्षसम्म सबैले बुझ्ने प्रश्न हुन् हजुरबुबा ।’ उहाँले भन्नु भयो ‘म पनि ठ्याक्कै सत्तरी वर्षको भए ।’ त्यसपछि हाम्रो सवाल जवाफको शिलशिला सुरु भएको थियो ।
त्यो बिचमा उहाँले मेरो पढाई कस्तो छ, बसाई कस्तो छ स्वास्थ अवस्था कस्तो छ धेरै कुरा सोध्नु भयो । उहाँको देश र जनताप्रतिको माया पार्टीहरूले जिम्मेवार भएर काम नगरेको गुनासो पोख्नु भयो । अनि भन्नु भयो ‘अब त काम युवाहरू गर्नु पर्छ हामीले भनेको त सिकाउने अह्राउने मात्र हो ।’ देशको बिग्रँदै गरेको राजनीतिको चिन्ता उहाँमा प्रष्ट नजर आउथ्यो । उहाँसँग मैले करिव दुई घण्टा कुरा गरे । त्यो अवधिमा उहाँको सादा र सरलपन प्रष्ट झल्किन्थ्यो । दैलेख जिल्लामा उहाँले लिएको राजनीति उचाइँ सायदै अरु कसैको देख्न पाइएला अबको दिनमा । यो नै मलाई उहाँको सफलता लाग्छ ।
त्यस्तो व्यक्तिलाई गुमाउँदा हाम्रा आँखाहरू नम हुनु, हाम्रो मुटु दुख्नु आम कुरा हो । यतिबेला उहाँको मृत्यु हाम्रो लागि पहाड जस्तै गह्रौ छ । जसलाई सहजै स्विकार्न गाह्रो छ । उहाँ जति प्रिय नेता हुनुहुन्थ्यो उति नै जिम्मेवार अभिभावक पनि हुनुहुन्थ्यो । हाम्रो परिवारको पुरानो अभिभावक हुनुहुन्थ्यो । हाम्रो खम्बा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले हाम्रो सम्पूर्ण परिवारलाई एकै ढिक्कामा बाँधेर राख्नु भएको थियो । उहाँसँग हाम्रो धरोहर ढलेको छ, हाम्रो मजबुत खम्बा डगमगाएको छ । जसको क्षति पूरा गर्न साह्रै गाह्रो छ ।
उहाँ जति प्रिय नेता हुनुहुन्थ्यो उति नै जिम्मेवार अभिभावक पनि हुनुहुन्थ्यो । हाम्रो परिवारको पुरानो अभिभावक हुनुहुन्थ्यो । हाम्रो खम्बा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले हाम्रो सम्पूर्ण परिवारलाई एकै ढिक्कामा बाँधेर राख्नु भएको थियो । उहाँसँग हाम्रो धरोहर ढलेको छ, हाम्रो मजबुत खम्बा डगमगाएको छ । जसको क्षति पूरा गर्न साह्रै गाह्रो छ ।
यतिबेला हामीले एउटा बौद्धिक सरल र उच्च सोच राख्ने नेता जसको जिन्दगी नै विशाल र गौरवमय थियो । जसले आफ्नो जिन्दगीको सम्पूर्ण जीवन राजनीतिलाई समर्पित गर्नु भएको थियो । त्यस्तो व्यक्तिलाई गुमाउँदा हाम्रा आँखाहरू नम हुनु, हाम्रो मुटु दुख्नु आम कुरा हो । यतिबेला उहाँको मृत्यु हाम्रो लागि पहाड जस्तै गह्रौ छ । जसलाई सहजै स्विकार्न गाह्रो छ । तर मलाई लाग्छ यो मृत्यु होइन, यो आरम्भको एउटा हो अलौकिक यात्राको, सुन्दर संसारको ।
मेरा हजुरबुबा सबैका प्रीय नेता हजुरलाई बिदा गर्न सजह त थिएन । तर यो नियम हो श्रृष्टिको जसलाई स्वीकार गर्नु हाम्रो दायित्व हो । हजुरबुबा हजुरको यात्रा अझ सुन्दर बनोस्, सफल बनोस् यो मेरो कामना हो । हजुरको आर्शिर्वाद हामीमा फूल बनेर वर्षिरहोस् यो हाम्रो इच्छा हो । हजुर जहाँ भए पनि हजुर प्रती इज्जत र सम्मान सदा रहिरहनेछ । हजुरप्रति सहृदयी हार्दिक श्रद्धासुमन हजुरबुबा प्रीय नेता…….!!